Faucet an-dakozia an-dakozia miaraka amina sintony | Faucet ao an-dakozia
Home / Fitaovana an-dakozia / Faucet an-dakozia an-dakozia / WOWOW 2-Fitaovana an-dakozia an-dakozia an-dakozia miaraka amin'ny mpitifitra amin'ny sisiny, Faucet an-tanety 8 Inch Centerset
WOWOW Faucet an-dakozia an-dakozia 2-tànana misy famafazana sisin-tany, Faucet an-tanety 8 Inch Centerset
Vita avy amin'ny varahina matevina, ny faucets booritra tsara tarehy any an-dakozia dia ahitana rafitra cartes de crèque seramika izay omena amin'ny 4 vita maharitra.
Ankoatr'izay, dia misy mpamatsy varahina famaohana amina fitaovana fanadiovana fanampiny sy tombony. Ny leverany mandanjalanja ary manasa ny géométika dia manome ny fientanany farany farany amin'ny grositra famoahana an-dakozia.
Faucet any an-dakozia 23115A1
Ny kiraro varahina an-dakozia klasin'ny WOWOW dia manasongadina famolavolana ny lakozia amin'ny endrika vazaha. Tena hampiditra ny fientanentanana mampientam-po amin'ny famahanana ao an-dakozia izany. WOWOW dia malaza amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho ny famoronana feno fahasamihafana. Ireo mpamorona ny WOWOW dia misy fiovana eo amin'ny tsena. Voamarikao avy hatrany izany rehefa hitanao ny famolavolana vaventy varahina manokana an'ny lakozia. Ny firafitry ny WOWOW dia manavaka ny tenany amin'ny famolavolana hafa, satria fantatry ny WOWOW fa tsy misy hafa fa ny faucets an-dakozia dia manampy zavatra manokana amin'ny haingo amin'ny lakozia. Ny faucaux an-dakozia WOWOW rehetra dia mety ho avy avy amin'ny gazety an-tsary manokana momba ny famolavolana an-dakozia sy mahavariana.
Ity boaty vy any an-dakozia WOWOW ity dia manisy endrika endrika antikony manokana miaraka amin'ny endriny misy curved. Ny fehin-kibo novolavolain'ny fehin-kibo dia manampy koa ny hatsaran-tarehy amin'ny lakoziao. Ity rindran-tsary tsara tarehy ity sy ny fananganana klasika dia mifampitohy miaraka amin'ity tsangambato ity amin'ny fanangonam-bokatra vita amin'ny boaty WOWOW. Tsy misy na inona na inona an'ity grosika an-dakozia ity dia ankasitrahan'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao.
Paoty any an-dakozia vita amin'ny mpamatsy kitapo
Ny endri-javatra mahavariana indrindra amin'ny talenta varahina WOWOW dia ny sprayer sisiny. Maro ny faucets an-dakozia no manolotra fampidinana am-baravarana na manintona spout. Ity spout ity dia mipetraka amin'ny faucet an-dakozia. Na izany aza, ity lafiny sprayer ity dia napetraka amin'ny fomba misaraka mba tsy handefitra amin'ny fiasa na tsia. Voalohany indrindra, miaraka amin'io fisintonana misintona mitokana io no ahafahanao manitatra ny faritra iasanao. Izy io dia ahitana hosotra rano 60 santimetatra afaka mampivelatra ny faritra iasanao amin'ny 30 santimetatra. Tena ilaina indrindra izany rehefa ny lakozian'ny lakozian'ny lakozia misy anao. Faharoa, manana spout manokana amin'ny fantsom-bolan'ny varahina ianao, ka ny spout tsirairay dia afaka manatanteraka ny adidiny misimisy tsara.
Ny lafiny sprayer azo atao mora foana amin'ny tanana iray. Ny hosoka misy vy vy azo esorina mora ary miala avy hatrany any amin'ny toerana niaviany. Azo avadika amin'ny tsindry bokotra ao aoriana ny fikorianan'ny rano, izay mipetraka tsara amin'ny sisiny an-damosin'ny mpamily ny sisiny. Tsy mila manao maneuvers sarotra ianao mba hahazoana ilay riirano tadiavinao. Ireo mpamorona ny WOWOW dia azo antoka fa nieritreritra ny famolavolana ergonomika ihany koa, mba hanolorana anao ny traikefa tsara indrindra azonao. Azonao atao ny misafidy rano mafana na mangatsiaka avy amin'nv sisin'ny sprayer. Nifidy ny rano mangatsiaka ny ankamaroan'ny olona, ​​fa ny rano mafana koa mety ho safidy. Indrindra rehefa mampiasa an'ity lafiny sprayer ity ianao raha te hanadio ohatra. Izy io dia ahitana fanodinana matanjaka mba hodiovina mora foana amin'ny vilany sy fanasana maloto.
Dobaka vita an-dakozia rojo vy
Ny kiririoka varahina dia vita amin'ny tànana roa. Io dia ahafahanao mifehy tsara ny rano mangatsiaka sy mafana mikasa mora foana. Ny tànana dia azo tanterahina tsara tsy misy na fikorontanana na mihemotra. Tsikaritrareo ny kalitaon'ireo entona sy ny mekanika ao aorian'izy ireo avy hatrany. Ity dia fitaovana vita amin'ny kilasy ambony indrindra. Raha mampiasa matetika ny grosinao an-dakozia ianao, farafaharatsiny imbetsaka isan'andro, dia ho azonao antoka fotsiny fa tsara ny zavatra niainanao.
Isaky ny mampiasa faucet an-dakozia ianao. Ny fahakiviana azy io dia mety ho sosotra amin'ny zava-bitan'ny faucet ao an-dakozia isan'andro, imbetsaka isan'andro. Avereno fotsiny mba hahatadidy fa nanao safidy ratsy ianao hisafidianana faucet ao an-dakozia. Miaraka amin'ny WOWOW dia hampahatsiahivina anao ny safidy tsara nataonao. Tsy azo ovana io fanandramana io, ary azontsika antoka fa amin'ny manaraka dia hisafidy ny WOWOW indray ianao.
Gripo-dakozia vita amin'ny kalitao avo lenta
Ny faucet an-dakozia varahina miaraka amina sisin-tsifotra dia vita amin'ny varahina mafy mba hiantohana ny kalitao sy ny faharetany. Ny famaranana avo lenta ihany koa dia manome antoka fa ny faucet ao an-dakozia dia afaka manohitra ny fandotoana na ny harafesina. Tena very maina izany rehefa misafidy faucet ao an-dakozia tsy hanana fenitra mitovy kalitao. WOWOW dia mihoatra ny fenitry ny indostria rehetra ary mihoatra lavitra ny marika A rehetra.
Ankoatra ny vovon-drameva vita amin'ny varahina dia vita amin'ny varahina matevina, ny grosika milentika any an-dakozia mavokely ity dia misy koa rafitry ny baoritra misy seramika. Ity rafitra ity dia manome antoka ny fampisehoana avo indrindra mandritra ny androm-piainan'ny poketra varahina. Ny kalitao no tokony ho toetoetran'ny gripe ao an-dakozia, satria ny tsy fisian'ny kalitao dia mety hanelingelina sy hanelingelina anao. Tokony hisoroka izany amin'ny fotoana rehetra, satria tsy ilaina ny mividy mofomamy any an-dakozia tsy misy kalitao ambany kokoa. WOWOW dia manaporofo fa afaka manana kalitao ambony amin'ny vidiny mora ianao. Tsy misy na inona na inona WOWOW fantatra eran'izao tontolo izao hanolotra ny vidiny tsara indrindra amin'ny vola mikasika ny faucets an-dakozia.
Ny mpanjifan'ny WOWOW rehetra dia voatazona hatramin'ny farany ambony indrindra. Tsy ny boaty an-dakozia ihany no miaraka amin'ny kitapo fametrahana feno. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny mametaka ny volonao an-dakozia varahina mora foana, tsy mampiasa fitaovana fanampiny. Saintsaino koa momba ny fonon-tanana manokana mba hahatonga ny traikefanao amin'ny fametrahana anao. Ho fanampin'izay, ny WOWOW dia mitondra ny mpanjifany ho mpanjaka, mba hiverenany isaky ny ambiny mandritra ny androm-piainany rehefa mila gropy izy ireo. Tsy misy na inona na inona WOWOW manana mpanjifa miverina manerantany izay tsy mivadika amin'ity marika ity. Izany dia azo ihany koa amin'ny serivisy mpanjifa tena tsara.
Mba hanasongadinana ny sandan'ny vola omenay anao, WOWOW dia tsy matahotra hanome anao fe-potoana fiantohana 5 taona. Ny ankamaroan'ny mpamatsy, na ny marika A aza dia manome antoka 1 taona. Raha rava ny faucet ao an-dakozanao amin'ny taona faharoa, dia mety ho atahoranao fotsiny izany. Ary mila mividy faucet dakozia vaovao indray ianao. Ao amin'ny WOWOW dia tsy hitantsika mihitsy io foara io, satria ny fantsona lakozia manara-penitra dia tokony haharitra 5 taona farafaharatsiny. Izany no antony anomezan'ny WOWOW anao izany vanim-potoana fiantohana tsy misy olana izany mandritra ny 5 taona. WOWOW dia resy lahatra amin'ny faucet dakozia varahina izay manome anao serivisy fiverenana 90 andro koa. Averinao ny volanao, famerenam-bola feno, rehefa tsy ho gaga ianao amin'ny sandan'ny vola azonao amin'ny faucet lakozia varahina ao amin'ny WOWOW. Ity antoka famerenam-bola ity dia manaporofo ny fahatokisantsika ny faucet dakozia varahina!
Ny tombony amin'ny faucet lakozia varahina amin'ny fohy:
• Asio misintona ny sisiny ivelany
• Nihosihosy nikororoka mahery
Ampahany : 23115A1 Sokajy: Faucet an-dakozia an-dakozia, Fitaovana an-dakozia Tags: 8 mirefy, Bridge, Vintage
19.25 X 13.75 X 2.9 santimetatra
Miaraka amin'ny sprayer amin'ny lafiny